Enwere ike inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị ịbanye? | Bezzia
Enwere ike inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị ịbanye?
Maria Jose Roldan | 08/04/2021 04:59 | Mmekọahụ
Ruo taa, nkwenkwe a ma ama ka na-ekwukarị na ọ bụrụ na ọ banyeghị, enweghị mmekọahụ. Ọ dị mkpa ịhapụ echiche dị otú ahụ ma chee na enwere mmekọahụ mgbe enwere mmetụ ahụ, masturbation ma ọ bụ mmekọahụ ọnụ n'etiti mmadụ abụọ ahụ.
Ikwesiri inwe uche karie nke oma ma chefuo banyere eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị mmekọahụ ma ọ bụrụ na nwoke ga-enwe ike ịbanye n'ime nwanyị ahụ n'oge mmekọahụ. N'isiokwu na-esonụ anyị na-enye gị ụfọdụ igodo iji hụ na enwere ike inwe mmekọahụ n'agbanyeghị na enweghị ịbanye.
1 Enwere ike inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị ịbanye
2 Ihe mgbagwoju anya nke mmekorita
3 Reedation na mmekọahụ
Enwere ike inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị ịbanye
Luckily enwere otutu ndi mmadu ndi na eche na enwere ike inwe mmeko ọ bụ ezie na ịbanye n'ime mmadụ anaghị eme. Echiche a na-aputakarị ụmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke. Mmadu gha enwe obi uto na nmekorita ya n’agbanyeghi na odighi nke ozo.
Agụụ mmekọahụ dara ogbenye a na-enweta na-eme ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ, ntinye nke amụ n'ime ikpu na-adị ka ihe amanye ka e were ya dị ka nwoke na nwanyị. Agụmakwụkwọ a na - enye obi ụtọ nke ụmụ nwoke karịa nke ụmụ nwanyị, yabụ enwere ike iwere ya dị ka oke iwe.
Ihe mgbagwoju anya nke mmekorita
Eziokwu ahụ bụ na mmekọahụ adịghị ebelata ịbanye na ọtụtụ echiche na ndị mmadụ kwesịrị ịdị na nwoke na nwanyị. Buru n'uche na inwe mmekọahụ dị mgbagwoju anya karị na enwere ike inwe mmekọahụ na afọ ojuju na-enweghị afọ ojuju na-enweghị ịbanye n'ime ma ọ bụ orgasm. Omume mmekọahụ ekwesịghị ibelata n'eziokwu nke ịmịnye amụ n'ime ikpu.
Igodo nke ihe niile a ga-achọ n'echiche ụmụ nwanyị. Enwere otutu ihe omumu nke n’egosiputa na umu nwanyi choro mmekorita nke nwanyi karia nke isi. Ọ dị obere na nwanyị nwere ike ịnụ ụtọ mmekọahụ ma ọ bụrụ naanị na nwoke abanye ya. Ha choro usoro omume ndi ozo iji nwee ike inwe obi uto ma nwee obi uto n'oge mmekorita nwoke na nwanyi.
Reedation na mmekọahụ
Nyere nke a, ọ dị mkpa inwe ike kụzighachi ihe gbasara mmekọahụ ma ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke. Ndi mmadu aghaghi ima banyere oge nile nke ike nwoke na nwoke nwere. Mmekọahụ abụghị naanị ịbanye na enwere ọtụtụ ụzọ iji nwee ọ enjoyụ n'àkwà na-enweghị ịbanye. Ruo mgbe nzụlite dị otú ahụ mere, ọtụtụ ndị ga-anọgide na-eche na mmekọahụ na-eme naanị ma ọ bụrụ na ọ dị ịbanye. Ọ dịkwa ezigbo mkpa ka gị na di na nwunye ahụ nwee ezigbo nkwukọrịta ka ha nwee ike ịkpa nkata n’enweghị ụdị izochi dị iche iche ma mara ka mmadụ abụọ ahụ si adị n’akwa karịa.
Na nkenke, o doro anya na enwere mmekọahụ, ịbanye n'ime mmadụ adịghị mkpa. Mmekọahụ sara mbara karị ma nwee ọtụtụ ụzọ isi soro onye gị na ya dinara ụra, n'agbanyeghị na enweghị ntinye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọahụ » Enwere ike inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na enweghị ịbanye?
Akwụkwọ 5 gbasara ụmụ nwanyị bipụtara n'afọ gara aga
Ihe oriri detox ọ na-arụ ọrụ n'ezie?